मुन्टो लुकाएर कति दिन हिड्ने? | katipath news
नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले सभापति शेरबहादुर देउवाले पार्टीको समस्या समाधान नगरी लुकेर हिँड्ने गरेको आरोप लगाएका छन्। देउवा निवास बूढानीलकण्ठमा बसेको पार्टी केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकमा उनले यस्तो आरोप लगाएका हुन्।
‘पार्टीको कार्यालाय छोडेर हिँड्न पर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्ने कि नगर्ने? अनसन अन्त्य गर्ने कि नगर्ने? सुतुरमुर्ग शैलीमा मुन्टो लुकाएर कति दिन हिड्ने? अवस्था सुधार्ने कि नगर्ने?,’ देउवालाई पौडेलको प्रश्न थियो।
उनले पार्टी कार्यालयमा भएको अनशन तोडाउने विषयमा सभापति गम्भीर नभएको तर भागीभागी बैठकलाई बूढानीलकण्ठ पुर्‍याएको बताएका थिए। ‘रौतहटका कार्यकर्ता ११६ दिनदेखि अनसन बसेका छन्। हामी भागेर बुढानीलकण्ठमा बैठक बसेका छौँ। सानेपाबाट भाग्नु परेको छ। हामी कसरी अघि बढ्ने हो? तपाईकै जिल्ला डडेल्धुराका मान्छे सानेपामा धर्नामा बसेका छन्,’ उनले थपे, ‘मैले भनेर हुने होइन तपाईंको जिल्लाको कुरा हो।’